ဆူပါဖလားနဲ့ ပြျောမှလေို့အပွီးမှာ တူဟယျလျကြျောဖွတျရမယျ့ စိနျချေါမှု ၅ ခု – Sports A2Z
ဒီရကျပိုငျးအတှငျးမှာပဲ ဗီလာရီးရဲလျနညျးပွ အူနိုငျး အမျမရီကို ကြျောဖွတျပွီး ဥရောပဆူပါဖလားခနျြပီယံဖွဈခဲ့တဲ့ ခယျြလျဆီးနညျးပွ သောမတျဈ တူဟယျလျက လုပျတတျကိုငျတတျတဲ့ နညျးပွလို့ အ​တျောလေးခြီးကြူးခံနရေသလို တဖကျမှာလညျး လုပျစရာကိုငျစရာတှကေလညျး ပွဿနာတခြို့ဖွရှေငျးဖို့ ကနျြရှိနပေါသေးတယျ။
ပဲလစျေ့နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျအဖှငျ့ကို ကစားရမယျ့ ခယျြလျဆီးအသငျးက ရာသီသဈကို တာထှကျလှပစပွေီး အရှိနျကောငျးသှားစခေဲ့တဲ့ ဆူပါဖလားနဲ့ ပြျောမှလေို့အပွီးမှာ တူဟယျလျကြျောဖွတျရမယျ့ စိနျချေါမှု ၅ ခု ကို တငျဆကျပေးပါရစေ။
၁။ တာဝနျကတြေဲ့ ဇီးယကျရျှဖွဈလာဖို့
ဗီလာရီးရဲလျကို အဖှငျ့ဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့ ဟာကငျးမျ ဇီးယကျရျှက ရာသီကွိုမှာ အတျောလေးခွမွေူးနတောကို တှရေ့တယျ။ ပီတာဘရော့အသငျးကို ဟကျထရဈသှငျးတယျ။ စပါးဈကို ၂ ဂိုးသှငျးတယျ။ အာဆငျနယျကို တဂိုးသှငျးယူခဲ့တယျ။ ပွနျရုနျးထနတေဲ့ မိုရိုကိုသားကို တူဟယျလျမွငျနရေပါပွီ။
လူသဈစိတျသဈနဲ့ ပွနျလာခဲ့တဲ့ ၂၈ နှဈသားက ခယျြလျဆီးတိုကျစဈ ၃ ယောကျတနျးရဲ့ ညာခွမျးနရောမှာ အတျောလေးအန်တရာယျကွီးတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဗီလာရီးရဲလျနဲ့ပှဲက သူ့ရဲ့ဖွတျတငျဘောတှကေ အူနိုငျး အမျမရီကို အသကျရှုကပျြစခေဲ့ပွီး သူဒဏျရာရပွီးထှကျသှားမှ သကျသာရာရသှားခဲ့သလို အသဈဝငျလာမယျ့ တိုကျစဈမှူး ရိုမီလူ လူကာကူးနဲ့ ဘယျလိုတာဝနျကပြွေနိုငျမလဲဆိုတဲ့ အခှငျ့အရေးကို တူဟယျလျလမျးညှနျပေးရဦးမှာပါ။
၂။ ဗာနာကို ဘယျလိုညှဈထုတျနိုငျမလဲ
ပွီးခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂျရာသီမှာ ၃၅ ပှဲကစားပွီး ၆ ဂိုးပဲရခဲ့တဲ့ ဂြာမနျသားကိုတော့ တူဟယျလျဆကျဂရုစိုကျရပါဦးမယျ။ ဗာနာနဲ့ လူကာကူတှဲဖကျလာမယျ့ ခယျြလျဆီးတိုကျစဈအားက မြှျောလငျ့စရာတခုတော့ ရှိနပေမေယျ့ ဘယျလျဂြီယမျသားကို ပိုပံ့ပိုးပေးနိုငျဖို့ အရေးကွီးနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။
ပေါငျ ၄၇.၅ သနျးတနျ အသကျ ၂၅ နှဈသားဟာ တူဟယျလျ ပညာသားပါပါကိုငျတှယျရဦးမယျ့ ပုစ်ဆာတခုဖွဈသလို ဒီအရေးမှာ သူက အဆုံးသတျပိုငျးညံ့ဖငျြးနသေေးတာကလှဲရငျ အသငျးဖျောတှကေို ဘယျလောကျပံ့ပိုးပေးနိုငျသလဲဆိုတာ ဗီလာရီးရဲလျနဲ့ပှဲက ခွစှေမျးက ထငျရှားနခေဲ့တာလညျးဖွဈပွီး တကိုယျကောငျးမဆနျတတျတဲ့ သူ့အားသာခကျြကို အဓိကသုံးစှဲသှားနိုငျဖို့ လိုအပျနပေါတယျ။
၃။ လူကာကူးတယောကျတညျးကို မှီခိုနလေို့မရ
ဒီအခကျြက ရိုးစငျးသလောကျ ခယျြလျဆီးကို ဒုက်ခအပေးနိုငျဆုံး ပွဿနာလညျးဖွဈပါတယျ။ ဇီးယကျရျှ၊ ဗာနာ၊ ခိုငျ ဟာဗတျဇျ၊ ပူလီရှဈချြတို့အားလုံးက တိုကျစဈမှူးအရညျအသှေးပါသလို ဂိုးသှငျးနိုငျစှမျးရှိပမေယျ့ တကယျ့ဂိုးသှငျးအားက မလုံလောကျသေးတာလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီအခွအေနမှော လူကာကူးက အားကိုးစရာတခုဖွဈလာပွီး ဂိုးသှငျးဖို့တာဝနျကို သူတဦးတညျးကသာ ပခုံးထမျးဖို့ ဖွဈလာရငျတော့ ခယျြလျဆီးတိုကျစဈက ပေါ့စလေိုလို့ ကွောငျရုပျထိုးကာမှ ဆေးအတှကျနဲ့ ပိုလေးပွီး တကယျရသငျ့တဲ့ဂိုးအရအေတှကျကို ရဖို့ ရှာလညျသှားနိုငျသလို စာရှကျထဲမှာ အထငျကွီးစရာကောငျးနတေဲ့ တိုကျစဈအငျအားစုက လကျတှမှေ့ာ တကယျဂိုးသှငျးခွရှေိလာဖို့ အားထုတျရဦးမှာပါ။
၄။ ခြာလိုဘာကွောငျ့ ကှနျဒဇောတျလမျးတခနျးရပျသှားနိုငျလား?
ဗီလာရီးရဲလျနဲ့ပှဲမှာ ခယျြလျဆီးအကယျဒမီထုတျကုနျ အသကျ ၂၂ နှဈသား ထရီဗာ ခြာလိုဘာကို တူဟယျလျက ဗဟိုခံစဈနရော ရဲရဲပှဲထုတျခဲ့တယျ။ မဆေနျမောငျ့၊ ရီးဈဂြိမျးဈတို့လို အကယျဒမီကနေ ပထမလူစာရငျးထဲ ဝငျတိုးလာတော့မယျ့ ခွစှေမျးမြိုးကို ပွသသှားခဲ့တယျ။
သူကစားတာ အတျောလေးငွိမျသလို ဂရြတျ မိုရီနိုကိုလညျး အကွောကျအလနျ့မရှိ ထိနျးခြုပျပွသှားတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဆီဗီလားကစားသမား ဂြူးလျဈကှနျဒအေတှကျ ငှပေုံပေးဦးမှာလားဆိုတာ မေးခှနျးထုတျခံနရေပွီး တကယျတမျးမှာတော့ ခြာလိုဘာကို တရာသီလုံးအားကိုးဖို့မဖွဈနိုငျဘဲ ခယျြလျဆီးက ပွငျသဈသားကို လိုအပျနဆေဲလို့လညျး တိုကျတှနျးခံထားရပါတယျ။
၅။ ကှနျတနေရော အရနျတယောကျလိုနတေယျ
ကှငျးလယျလူ အနျဂိုလို ကှနျတကေ ဘယျလိုပဲ အဆုတျ ၄ လုံးနဲ့ ကစားနပေါတယျပွောပွော တရာသီလုံးလြှောကျရမယျ့ ခရီးကွမျးမှာတော့ သူ့ရဲ့ဝနျကို လြှော့ခပြေးမယျ့ အရနျလူတယောကျကို တူဟယျလျလိုအပျဦးမှာပါ။ ကှနျတကေ သကျလုံအားသိပျကောငျးတယျ။ ပါဝါသိပျပွငျးတယျ။
ဒါပမေယျ့ အသကျ ၃၀ အရှယျ ပွငျသဈသားကွီးသာ ဒဏျရာရသှားခဲ့မယျလို့ တှေးကွညျ့ရငျ တူဟယျလျအတှကျ အိပျမကျဆိုးကွီးဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။ အခုခြိနျမှာ ကှနျတနေရော အသငျ့အစားထိုးနိုငျမယျ့ ကှငျးလယျအဖကျြ အရနျလူတယောကျကို ကွိုတငျပွငျဆငျထားဖို့ လိုပွီး စတမျးဖို့ဒျမွဆေီ ခြိတျဆကျနတေဲ့ မိုနာကိုကှငျးလယျလူ Aurelien Tchouameni ကို ချေါယူထားမယျဆိုရငျလညျး မဆိုးဘူးလို့ ပွောရမှာပါ
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ဗီလာရီးရဲလ်နည်းပြ အူနိုင်း အမ်မရီကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဥရောပစူပါဖလားချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီးနည်းပြ သောမတ်စ် တူဟယ်လ်က လုပ်တတ်ကိုင်တတ်တဲ့ နည်းပြလို့ အ​တော်လေးချီးကျူးခံနေရသလို တဖက်မှာလည်း လုပ်စရာကိုင်စရာတွေကလည်း ပြဿနာတချို့ဖြေရှင်းဖို့ ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။
ပဲလေ့စ်နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွင့်ကို ကစားရမယ့် ချယ်လ်ဆီးအသင်းက ရာသီသစ်ကို တာထွက်လှပစေပြီး အရှိန်ကောင်းသွားစေခဲ့တဲ့ စူပါဖလားနဲ့ ပျော်မွေ့လို့အပြီးမှာ တူဟယ်လ်ကျော်ဖြတ်ရမယ့် စိန်ခေါ်မှု ၅ ခု ကို တင်ဆက်ပေးပါရစေ။
၁။ တာဝန်ကျေတဲ့ ဇီးယက်ရ်ှဖြစ်လာဖို့
ဗီလာရီးရဲလ်ကို အဖွင့်ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ ဟာကင်းမ် ဇီးယက်ရ်ှက ရာသီကြိုမှာ အတော်လေးခြေမြူးနေတာကို တွေ့ရတယ်။ ပီတာဘရော့အသင်းကို ဟက်ထရစ်သွင်းတယ်။ စပါးစ်ကို ၂ ဂိုးသွင်းတယ်။ အာဆင်နယ်ကို တဂိုးသွှင်းယူခဲ့တယ်။ ပြန်ရုန်းထနေတဲ့ မိုရိုကိုသားကို တူဟယ်လ်မြင်နေရပါပြီ။
လူသစ်စိတ်သစ်နဲ့ ပြန်လာခဲ့တဲ့ ၂၈ နှစ်သားက ချယ်လ်ဆီးတိုက်စစ် ၃ ယောက်တန်းရဲ့ ညာခြမ်းနေရာမှာ အတော်လေးအန္တရာယ်ကြီးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဗီလာရီးရဲလ်နဲ့ပွဲက သူ့ရဲ့ဖြတ်တင်ဘောတွေက အူနိုင်း အမ်မရီကို အသက်ရှုကျပ်စေခဲ့ပြီး သူဒဏ်ရာရပြီးထွက်သွားမှ သက်သာရာရသွားခဲ့သလို အသစ်ဝင်လာမယ့် တိုက်စစ်မှူး ရိုမီလူ လူကာကူးနဲ့ ဘယ်လိုတာဝန်ကျေပြနိုင်မလဲဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးကို တူဟယ်လ်လမ်းညွှန်ပေးရဦးမှာပါ။
၂။ ဗာနာကို ဘယ်လိုညှစ်ထုတ်နိုင်မလဲ
ပြီးခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီမှာ ၃၅ ပွဲကစားပြီး ၆ ဂိုးပဲရခဲ့တဲ့ ဂျာမန်သားကိုတော့ တူဟယ်လ်ဆက်ဂရုစိုက်ရပါဦးမယ်။ သူနဲ့ လူကာကူတွဲဖက်လာမယ့် ချယ်လ်ဆီးတိုက်စစ်အားက မျှော်လင့်စရာတခုတော့ ရှိနေပေမယ့် ဘယ်လ်ဂျီယမ်သားကို ပိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပေါင် ၄၇.၅ သန်းတန် အသက် ၂၅ နှစ်သားဟာ တူဟယ်လ် ပညာသားပါပါကိုင်တွယ်ရဦးမယ့် ပုစ္ဆာတခုဖြစ်သလို ဒီအရေးမှာ သူက အဆုံးသတ်ပိုင်းညံ့ဖျင်းနေသေးတာကလွဲရင် အသင်းဖော်တွေကို ဘယ်လောက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်သလဲဆိုတာ ဗီလာရီးရဲလ်နဲ့ပွဲက ခြေစွမ်းက ထင်ရှားနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပြီး တကိုယ်ကောင်းမဆန်တတ်တဲ့ သူ့အားသာချက်ကို အဓိကသုံးစွဲသွားနိုင်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။
၃။ လူကာကူးတယောက်တည်းကို မှီခိုနေလို့မရ
ဒီအချက်က ရိုးစင်းသလောက် ချယ်လ်ဆီးကို ဒုက္ခအပေးနိုင်ဆုံး ပြဿနာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဇီးယက်ရှ်၊ ဗာနာ၊ ခိုင်ဟာဗတ်ဇ်၊ ပူလီရှစ်ခ်ျတို့အားလုံးက တိုက်စစ်မှူးအရည်အသွေးပါသလို ဂိုးသွင်းနိုင်စွမ်းရှိပေမယ့် တကယ့်ဂိုးသွင်းအားက မလုံလောက်သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေမှာ လူကာကူးက အားကိုးစရာတခုဖြစ်လာပြီး ဂိုးသွင်းဖို့တာဝန်ကို သူတဦးတည်းကသာ ပခုံးထမ်းဖို့ ဖြစ်လာရင်တော့ ချယ်လ်ဆီးတိုက်စစ်က ပေါ့စေလိုလို့ ကြောင်ရုပ်ထိုးကာမှ ဆေးအတွက်နဲ့ ပိုလေးပြီး တကယ်ရသင့်တဲ့ဂိုးအရေအတွက်ကို ရဖို့ ရွာလည်သွားနိုင်သလို စာရွက်ထဲမှာ အထင်ကြီးစရာကောင်းနေတဲ့ တိုက်စစ်အင်အားစုက လက်တွေ့မှာ တကယ်ဂိုးသွင်းခြေရှိလာဖို့ အားထုတ်ရဦးမှာပါ။
၄။ ချာလိုဘာကြောင့် ကွန်ဒေဇာတ်လမ်းတခန်းရပ်သွားနိုင်လား?
ဗီလာရီးရဲလ်နဲ့ပွဲမှာ ချယ်လ်ဆီးအကယ်ဒမီထုတ်ကုန် အသက် ၂၂ နှစ်သား ထရီဗာ ချာလိုဘာကို တူဟယ်လ်က ဗဟိုခံစစ်နေရာ ရဲရဲပွဲထုတ်ခဲ့တယ်။ မေဆန်မောင့်၊ ရီးစ်ဂျိမ်းစ်တို့လို အကယ်ဒမီကနေ ပထမလူစာရင်းထဲ ဝင်တိုးလာတော့မယ့် ခြေစွမ်းမျိုးကို ပြသသွားခဲ့တယ်။
သူကစားတာ အတော်လေးငြိမ်သလို ဂျရတ် မိုရီနိုကိုလည်း အကြောက်အလန့်မရှိ ထိန်းချုပ်ပြသွားတယ်။ ဒါကြောင့် ဆီဗီလားကစားသမား ဂျူးလ်စ်ကွန်ဒေအတွက် ငွေပုံပေးဦးမှာလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်ခံနေရပြီး တကယ်တမ်းမှာတော့ ချာလိုဘာကို တရာသီလုံးအားကိုးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘဲ ချယ်လ်ဆီးက ပြင်သစ်သားကို လိုအပ်နေဆဲလို့လည်း တိုက်တွန်းခံထားရပါတယ်။
၅။ ကွန်တေနေရာ အရန်တယောက်လိုနေတယ်
ကွင်းလယ်လူ အန်ဂိုလို ကွန်တေက ဘယ်လိုပဲ အဆုတ် ၄ လုံးနဲ့ ကစားနေပါတယ်ပြောပြော တရာသီလုံးလျှောက်ရမယ့် ခရီးကြမ်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ဝန်ကို လျှော့ချပေးမယ့် အရန်လူတယောက်ကို တူဟယ်လ်လိုအပ်ဦးမှာပါ။ ကွန်တေက သက်လုံအားသိပ်ကောင်းတယ်။ ပါဝါသိပ်ပြင်းတယ်။
ဒါပေမယ့် အသက် ၃၀ အရွယ် ပြင်သစ်သားကြီးသာ ဒဏ်ရာရသွားခဲ့မယ်လို့ တွေးကြည့်ရင် တူဟယ်လ်အတွက် အိပ်မက်ဆိုးကြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အခုချိန်မှာ ကွန်တေနေရာ အသင့်အစားထိုးနိုင်မယ့် ကွင်းလယ်အဖျက် အရန်လူတယောက်ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုပြီး စတမ်းဖို့ဒ်မြေဆီ ချိတ်ဆက်နေတဲ့ မိုနာကိုကွင်းလယ်လူ Aurelien Tchouameni ကို ခေါ်ယူထားမယ်ဆိုရင်လည်း မဆိုးဘူးလို့ ပြောရမှာပါ
ဘရူနို ဖာနနျဒကျဈရဲ့ ဟကျထရဈနဲ့ ပေါကျကှဲပွီး အိမျကှငျးမှာ ငါးဂိုးသှငျးပွတဲ့ ယူနိုကျတကျ